6 kanal ee ugu wanaagsan Telegram -ka oo loo qaybiyey mowduucyo | Madasha Mobile
Cristian Garcia | | telegraam
Miyaanad weli ku jirin waxyaalahan oo dhan Kanaallada Telegram Maxaan ku xigsiin doonnaa? markaa waxaad ka maqan tahay waxyaabo badan iyo mawduucyo, xitaa dalabyo iyo dallacsiin, kuwaas oo kaliya kooxahan Telegram aad si dhakhso leh uga heli doonto. Si dhakhso ah ma seegi doontid hal, ballanqaaday. Tani kaliya maahan dalabyo, waxaad sidoo kale ka heli doontaa weedho qurxoon, kooxo farsamo, kooxo kaftan ah, kooxaha kale waxaad ka heli kartaa waraaqaha gidaarka iyo xitaa akhrin kartaa warka maalinta laga bilaabo subaxdii hore.
Maqaalkan, sidaan kuu sheegnay, waxaan u socon doonnaa inaan sidaas ku hadalno isku -dubaridka kanaalada ugu fiican ee aad ka heli karto arjigan farriinta deg -degga ah iyo dhammaanba, oo aad ugu biiri karto lacag la'aan. Oo na dhegeyso, Telegram -ka waxaa jira kumanaan iyo kumanaan kanaal iyo kooxo ah, sidaa darteed, waxaa wanaagsan inaad fiiro gaar ah u yeelato dusha ama liiskan oo kale maxaa yeelay haddii aad si toos ah uga raadiso dalabka laftiisa, waad waalan doontaa. Kahor intaanan arrintan ka hadlin, waxaan samayn doonaa qayb yar oo aan kuugu sheegi doonno farqiga u dhexeeya koox iyo kanaal.
1 Waa maxay kanaalka Telegram -ka iyo waa maxay Telegram group? Farqiga u dhexeeya
2 Kanaalka Telegram
2.1 Ku baro luuqadaha kanaalkan
2.2 Baro wax kariska kanaaladan
2.3 Kanaalada wararka
2.4 Kanaalka ciyaarta fiidiyaha iyo barnaamijyo kala duwan
2.5 Kanaalka si aad u hesho dalabyo iyo gorgortan Telegram
2.6 Kanaalada akhristayaasha
Waa maxay kanaalka Telegram -ka iyo waa maxay Telegram group? Farqiga u dhexeeya
Si aad ula qabsato fikradda, Telegram waxaad ka heli doontaa kooxo u eg WhatsApp laakiin sidoo kale kanaalada dadweynaha ama kuwa gaarka loo leeyahay. Si aad u hesho farqiga u dhexeeya kan telegram channel iyo koox waa taas kanaalka marna ma awoodi doontid inaad ku hadasho, qofka wax abuura ama oggolaada dadka kale oo keliya ayaa hadli kara, waana sababta loogu isticmaalay bixinta macluumaadka, gudbinta dalabyada iyo waxyaabo kale oo kala duwan. Markaad soo gasho kanaalkan, waxa dhici doona waa inaad xog uun heli doontaa oo waxaad awoodi doontaa inaad soo dejiso faylasha ay maamulayaashu ku dhajiyaan kanaalka.
Ugu dambayntii, waa in la yidhaahdaa kanaaladan kuma heli doonno xadka dadka geli kara kanalka. Kaalay maxaa kooxda sidaas oo kale gebi ahaanba way ka duwan tahay wixii aan kuu sharraxnay, maadaama aad awoodi doonto inaad hadasho, soo dirto sawirro, ama wax kasta oo aad jeceshahay.
Si aan xog dheeraad ah kaaga siiyo mowduucan, waa in la dhahaa waxaa jiri doona kanaallo dadweyne laakiin waxaa kaloo jiri doona kanaallo gaar loo leeyahay. Kuwa gaarka loo leeyahay ayaa iska cad kanaallo shaqsiyeed, si aad ugu wacdo si uun, si fudud uma geli kartid haddii aysan ku casuumin, waxaad ku biiri kartaa dadweynaha adigoon wax dhibaato ah qabin. Si aad awood ugu yeelatid inaad ku biirto kanaalka dadweynaha waxaad ku samayn kartaa isku xirka, martiqaadka ama adoo ka raadinaya isla codsi Telegram.
Markaan ogaano waxaas oo dhan, waxaan sii wadi doonnaa inaan liis ku sameyno kanaalada Telegram ee ugu wanaagsan ee aan aragnay oo aan tijaabinay. Aan halkaas tagno!
Si aad u gasho kanaaladan waxaan kuugu reebaynaa magacooda, kaliya waxaad ka raadin doontaa barnaamijka laftiisa adiga oo galaya magaca aad ka heli doonto maqaalkan.
Ku baro luuqadaha kanaalkan
Ma baranaysaa luqadaha? markaa kooxahan aan kaa xigi doonno ayaa kaa caawin doona barashada luqadda. Kooxahan waxaad ku baran kartaa tarjumaado kala duwan, ku dhawaaqid, hadal sarbeebeed, tibaaxo iyo noocyo kale oo waxyaalo ah oo aad ka fikiri karto dhibaato la'aan. Magaca labada kooxood waa 'Luqadaha Ingiriisiga Dhulka' iyo marka labaad 'Ingiriis Maalin kasta'.
Baro wax kariska kanaaladan
Haddii aad horay u baranaysay luqadaha laakiin daqiiqad la siiyay waxaad noqotay jikada oo dhan, kuwani waa kanaalada telegram -kaaga shaki la'aan. Kanaalladaas wax -karinta waxaad ka heli doontaa suxuunno kaamil ah, cuntooyin iyo, wax kasta oo ka sarreeya, dhiirrigelin guud ahaan si aad u barato sida wax loo kariyo sida kuugga cuntada culus. U diyaari casho taariikhda jaceylkaaga ama la kulanka saaxiibbada kooxahan wax karinta. Waxaad heli doontaa kuwo badan, laakiin inta badan midka aan aragnay kan ugu fiican ayaa ah 'Jacaylka Cuntada'.
Farqiga u dhexeeya WhatsApp, Telegram, Signal, Messenger iyo Apple Messages
Sida magaceedu sheegayo, halkan waxaad ogaan doontaa gabi ahaanba wax kasta oo dhacaya maalin kasta. Sababtoo ah haddii aadan aamusin kooxaha, waxaad heli doontaa ogeysiisyo marka warka laftiisu soo baxo, taas oo ah, waxaad yeelan doontaa macluumaad ku saabsan mowduucyo kala duwan daqiiqadba daqiiqad. Ma seegi doontid wax kasta oo adduunka ka dhaca iyada oo ay ugu mahadcelinayaan kanaalahan wararka Telegram. Kanaalada laga hadlayo ee aad ku biiri karto waa kuwan soo socda: eldiario. iyo kuwo kale oo badan oo aad ka heli doonto adiga oo ka dhex raadinaya mashiinka raadinta appka.
Kanaalka ciyaarta fiidiyaha iyo barnaamijyo kala duwan
5 Bogagga ugu Wanaagsan ee loogu Degsado Ciyaaraha kombuyuutarka
Ma tahay khamaarle wanaagsan? markaa ma seegi doontid dalab ama war ka socda qaybta ciyaarta fiidiyaha ee leh kanaalada Telegram -ka. Waxa aad heli doontaa ayaa ah inaad ka ogaan doonto dhammaan sii -deynta rasmiga ah ee cayaaraha fiidiyaha ee ugu fiican oo xitaa waxaad heli doontaa kanaallo aad kala soo degto APK -yo badan si aad ugu ciyaarto taleefankaaga gacanta. Kanaalada laga hadlayo waa kuwan soo socda: Consoles Retro, Ciyaaraha, APK APK FULL PRO Reborn, Switch Mania, Playmobil, LegOffers, OffersPlaystation Games, OffersXbox Games, OffersN Nintendo Games.
Kanaalka si aad u hesho dalabyo iyo gorgortan Telegram
Miyaad si joogto ah wax uga iibsataa internetka? Markaa waxaad ogaan doontaa inaad ku gorgortami karto gorgortan haddii aad ka mid tahay kuwa sugaya waqtiga ku habboon oo raadinaya dalabka. Hagaag, kanaaladan dalabyada iyo gorgortanka ma seegi doontid hal, waan dammaanad qaadaynaa. Waxaad ka heli doontaa dalabyo taleefannada gacanta ama farsamada isla markiiba, gacantaada ayaa go'aamineysa inaad ka faa'iideysato dalabka ama aad raadsato mid ka fiican. Gabagabadii, kanaaladan ayaa ku ogeysiin doona in tani ay tahay dalabka ugu fiican ee hadda ka jira internetka.
Kanaalada dalabka ee aad ka heli doonto Telegram waa kuwan soo socda: Aliexpress, Maalinta Xiaomi, Aagga Gorgortanka, Gorgortanka Andro4all.
Ugu dambayntii, ma ahayn inaan ka tagno akhristayaasha la illaaway. Haa, sidoo kale waxaa jira kanaallo Telegram kuu ah. Haddii aad jeceshahay akhriska waxaad heli doontaa kanaallo badan oo aad akhrido cinwaano kala duwan. Waxaad ka soo dejisan kartaa sida caadiga ah barnaamijka Telegram -ka laftiisa ama waxay kuu wareejin doontaa meesha aad ka heli karto iyadoo laga heli karo qaababkeeda kala duwan. Waxay kaloo kuu gudbin doonaan xayeysiisyo si aad uga faa'iidaysato oo aad wax u iibsato.
Halkee lagala soo bixi karaa joornaalada PDF ee bilaashka ah
Kanaalka akhriska ee aan ka hadlaynaa waa kuwan soo socda: Buugaag bilaash ah, 8Freebooks.net, Dhammaan Cilmi -nafsiga, Xaqiiqooyinka Baybalka.
Maxay kula tahay? Ma helnay dulucdaadii? Haddii aadan helin, noogu sheeg sanduuqa faallada si aan u sii galno oo aan u raadinno kanaalada Telegram ee ku habboon dhadhankaaga. Waxaan kugu arki doonaa maqaalka soo socda!
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Shabakadaha Bulshada » telegraam » 6 kanal ee ugu wanaagsan Telegram -ka oo loo kala qaybiyay mawduucyo